Camden Town - Xaafadda ugu badan ee London lagu beddelo | Safarka Absolut
Camden Town waa xaafad London ka mid ah, kaas oo ku yaal Camden. Waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah meelaha ugu nolosha badan, qaasatan maalmaha fasaxa ah ee dalxiiska ku soo qulqulo meeshan. Intaa waxaa dheer, ma ilaabi karno mid ka mid ah suuqyada ugu caansan, oo sidoo kale ku yaal aaggan.
Aaggan, muusikada beddelka ah ayaa ku kulmaya, iyada oo ay ugu wacan tahay xaddiga baararka, baararka iyo maqaayadaha kuwaas oo daryeela iyada. Intaa waxaa sii dheer, qaar ka mid ah kooxihii ugu caansanaa ayaa iyagana soo maray iyaga. Shaki la'aan, Camden Town waa goob aad u xiiso badan oo gaar ah oo lagu booqdo ugu yaraan hal mar noloshaada. Halkan ka ogow waxa ku seegi kara!
1 Magaalada Camden, soojiidashada dalxiiska
2 Aaga kanaalka
3 Qufulka Camden
4 Suuqa Camden
5 Roundhouse, bandhigyada waaweyn
6 Beerta Regent
7 Meelaha ku xiga magaalada Camden
8 Tabaha tixgelinta la siinayo
Magaalada Camden, soojiidashada dalxiiska
Malaha aaggan xoogaa wuxuu ku jabayaa waxa aan ku booqan karno London. Camden Town had iyo jeer waa mashquul taraafikada mararka qaarkood, waxay u horseedi kartaa aag fowdo. Dhismayaasha sidoo kale waxay leeyihiin qurxiyo iyo wajiyaal kuwa asalka ah oo aan caadi ahayn. Laakiin waxaa laga yaabaa inay tahay waxaas oo dhan in meeshani ay noqotay mid ka mid ah meelaha ugu caansan dalxiis. Waxaa la sheegay inay tahay tii afaraad ee ugu booqashada badan. Sida ugu wanaagsan ee aad ku tagi karto waa tareenka dhulka hoostiisa mara. Midkani, markuu yimaado meeshan, wuxuu leeyahay mid keliya ka bax waddada weyn ee Camden dhanka midigna waxaad ka arki kartaa dhamaan midabada guryahooda.
Markaan socod ku marayno aaggan, waxaan u nimid qaybta kanaalka. Si tan loo sameeyo, waa inaad ku socotaa wadada weyn ee Camden waxaadna gaari doontaa buundo aad ku arki karto albaabbada kanaalka. Qodobkan ayaa la sheegay inuu yahay mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee aad ku raaxeysan karto xaafadda Camden. Waad u dhaadhaci kartaa qaybta kanaalka oo tan awgeed, socod ku dhex mar Beerta Regent ama sii wad ilaa Venedik yar. Haddii aadan dareemin inaad lugeyneyso, doomaha ayaa had iyo jeer halkaas jooga si ay kaaga caawiyaan inaad ku raaxaysato aaggan.
Waxa loogu yeero Camden Lock waa mid ka mid ah suuqyada ugu muhiimsan ee meeshani leedahay. Sida aan aragno, dukaamada, goobaha cuntada lagu iibiyo iyo suuqa ayaa aad u badan. Waa saddexda saldhig ee Camden. Qufulka ka dib waxaad heli doontaa Xeryaha Suuqa. Labadaba waxaad kaheleysaa jagooyinka ugu kaladuwan. Laga soo bilaabo cuntada ka timaadda qaybaha kala duwan ee adduunka ilaa alaabta guridda, dharka gothic-ka ah ama dukaamada cajiin. Waxa kale oo aad arki doontaa dabaqyo taxane ah oo fiirinaya kanaalka. Marka, waxaad dooran kartaa qaabka aad ugu jeceshahay inaad ugu raaxeysato booqashadaada.
Suuqyada aan ka heli karno aaggan, hubaal midka sida ugu badan kuugu dhawaaqaya waa kan. Suuqa loo yaqaan 'Camden Market' ayaa ah midka dadka ku kalifiya inay qorshooyin ka sameystaan ​​isbuuc walba. Waa mid ka mid ah qodobbada waaweyn ee kulanka. Dalxiisayaal badan ayaa yimaada si ay u awoodaan inay lugeeyaan isla mar ahaantaana, si ay ugu raaxaystaan ​​farsamada gacanta iyo dharka moodada ah ee halkaas lagu iibiyo. Dad baa sidaa leh wiig walba, waxay martigalin doontaa in kabadan 100 oo qof. Waxaa la furay 1974 ilaa waqtigaasna aad ayey u guuleysatay.
Roundhouse, bandhigyada waaweyn
In kasta oo waddada dhinaceeda aad ka heli karto baarar kala duwan ayaa haddana waxaa ku yaal meel riwaayado aanad ka tagi karin. Waa dhisme loogu magac daray guri wareeg ah. Isla markaaba Xeryaha oo aan dhex marno Beerta Beerta, waxaan imaan doonnaa meeshan. Dhexdeeda, riwaayado tiro badan ayaa lagu qabtaa. Qaar ka mid ah sadaqo halkaasoo laga arki karo magacyo waaweyn oo caan ah. In kasta oo laga soo bilaabo 2006 isticmaalkeeda inta badan loogu talagay tiyaatar ahaan.
Si aad uga nasan karto buuqa dadka oo dhan ama dukaameysiga, waxna uma jecla booqashada jardiinada weyn ee meeshan. Waxaa la sheegay in meeshan uu ugaarsaday Henry VIII. Waxaad arki doontaa sida ubaxdu u yihiin kuwa ugu waaweyn, iyo sidoo kale balliyada shinbiraha. Haddii aad la raacdo carruurta, ha ka waaban inaad waqti fiican ku hesho halkan maxaa yeelay waxay u leedahay meelo bannaan oo kala duwan. Xuquuqda woqooyi ee beertan, waxaad la kulmi doontaa Beerta Xayawaanka ee London.
Meelaha ku xiga magaalada Camden
In kasta oo waqtiga aaggan uu duulayo, had iyo jeer waad ka faa'iideysan kartaa safarkaaga. Haddii aad rabto inaad ogaato waxa xiga ee aad arki doontid, waxaan kuu sheegaynaa inaad ku dalxiis tagi karto Matxafka Sherlock Holmes oo masaafo dhawr kiiloo mitir u jira. Isaga oo kale Madame Tussauds of London. Matxafka Ingiriisku sidoo kale wuxuu u jiraa in ka yar laba kiiloo mitir. Marka, adduunka dhaqanka ayaa inagu sugaya geeska. Dabcan, in yar markaan sii fogaanno waxaan ka heli karnaa bar kulan kale oo aan tixgelinno, Hyde Park. In kasta oo la sii wado booqashada aaggan, waxaan mar hore u baahanahay waqti dheeri ah.
Markay tahay booqashada Camden Town, waa inaan si cad u sheegnaa in subax oo dhan ay noqon doonto waqti gaaban. Sida aan aragno, waxaa ka buuxa dukaamo, baarar iyo madadaalo mudan in si wanaagsan oo deggan loo arko. Dabcan, hadaad hal mar oo keliya qaadato adigoon istaagin, markaa hal subax ayaa kuugu noqon doonta waqtigaaga ugu badan. Ha ilaawin inaad sidoo kale booqato dukaamada ugu xiisaha badan aagga. Waxaa jira mid iyaga ka mid ah oo loogu talagalay adduunka internetka, oo leh dhammaan faahfaahintiisa. Dadku waxay dhahaan maalinta ugu wanaagsan ee meeshan la tago waa Axad.
Waqtiga qadada, sidoo kale waxaad heli doontaa dukaamo aad u kala duwan. Sidii aan soo sheegnay dhibaato ma noqon doonto in la isku dayo dhadhan kala duwan iyo ka dhadham suxuunta cunnooyinka gebi ahaanba ka duwan. Laakiin haa, ha ku degdegin inaad wax cuntid. In kabadan waxkasta maxaa yeelay sida saacaduhu usocdaan, qiimahoodu hoos ayuu usii dhacayaa. Wax xisaabta lagu darsado !. Si aan u gaarno aaggan, waxaan dhahnay in metro-ga uu yahay habka ugu fiican ee gaadiidka aad ku tagi karto. Waa inaad qaadataa khadka woqooyi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Camden Town
Maxaa lagu arkaa Palencia
Dhagaxyada ugu fiican Spain